Toddobaadka Mashruuca | BGA
Toddobaadka Mashruuca waa waqtiga qof walba ugu jecel yahay sanad dugsiyeedka. Siinta ardayda fursad ay ku sahamiyaan fikradaha iyo meelaha, tijaabiyaan oo abuuraan, ku riyoodaan oo ay gartaan, waa qayb muhiim ka ah waxbarashada wanaagsan. Inta lagu gudajiro Toddobaadka Mashruuca (bisha Abriil ee Dugsiga Sare, bisha Juun ee Dugsiga Dhexe) ardayda kuma fadhiyaan miiskooda ama ma wareegaan inta u dhexeysa fasallada. Bedelkeed waxay joogaan jaamacadda - socodka, baaskiil wadista, karinta, ka fiirsashada, waxbarista, qoob ka ciyaarka, doonida wadista, rinjiyeynta, ilaalinta, sahaminta, sahminta iyo ku lug lahaanshaha - bulshada Greater Boston iyo wixii ka dambeeya.
Toddobaadka Mashruuca wuxuu dhisayaa bulshada: wuxuu meesha ka saarayaa xuduudaha u dhexeeya ardayda iyo macallimiinta iyo fasalada iyo fasallada oo dhan; waxay siisaa fursado jimicsi jir ahaaneed iyo mid maskaxeed iyo isbedel adduunka ka dhaca; wuxuu ku xiraa ardayda ganacsiga, dowladda, macaashka iyo xarumaha dhaqamada; waxayna caqabad ku tahay aagagga raaxada waxayna bixisaa dareen ah meel ay ku sugan yihiin iyo mas'uuliyad wadaag ah ee bulshada adduunka.